China Jumbo Bag FIBC Machine manapaka lamba CSJ-2200 orinasa sy mpanamboatra | VYT
Nandray anjara tamin'ny fanamboarana, ny famatsiana ary ny fanondranana ny FIBC fanapahana amin'ny masinina manapaka spout isika. Ny masinina fanapahana lamba natolotra dia rafitra milina mavesatra sy matanjaka, ampiasaina amin'ny fanapahana marina ny fitaovana. Ny milina fanapahana natolotray dia ny rafitra miorina amin'ny microprocessor, izay omena tontonana fanaraha-maso marobe. Ny milina fanapahana natolotra dia mamonjy toerana sy fampiasana mpiasa.
Ny CSJ- 1400, CSJ- 2200 ary CSJ-2400 dia milina azo ianteherana sy mahomby natao hamokarana ireo takelaka FIBC (Jumbo Bags) misy halavany efa voafaritra miaraka amin'ny mety ho fanapahana profil namboarina ho takin'ny mpanjifa.
Ny rafitra fanaraha-maso ny solosaina an'ny milina fanapahana lamba mandeha ho azy ho an'ny kitapo jumbo dia mandray ny teknolojia fanaraha-maso AC mandroso manerantany handroahana ny motera ampela, izay manana ny mampiavaka ny tady lehibe, ny fahombiazana avo lenta, ny fahamendrehana haingam-pandeha ary ny tabataba ambany. Ny famolavolana tontonana fiasa dia miovaova, izay afaka mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa samihafa. Ny rafitra dia mandray ny endrika firafitra sinoa, izay mety amin'ny fametrahana sy fikojakojana
1 MODELY CSJ-2200
2 Max sakany fanapahana 2200mm na namboarina
4 Fanapahana mazava tsara ± 1-10cm
6 Mamokatra fahaiza-manao 10-20 pc / min （halavan'ny 1600mm）
7 Haben'ny lavaka "O" ＜ 600mm
8 Haben'ny lavaka "+" ＜ 600mm
9 Fanaraha-maso ny mari-pana 0-400 degre
10 Herin'ny motera 10KW
11 Zintin'aratra 380V 3phase 50Hz
12 Rivotra voafintina 6Kg / cm²
1) milina fanapahana kitapo jumbo CSJ-2200 sy fitaovana mitambatra ho an'ny fanapahana faribolana lehibe;
2) Miaraka amin'ny fiasa fanitsiana mandeha ho azy, ny halaviran'ny fanitsiana diso dia 300 mm;
3) Miaraka amin'ny fiasan'ny lamba mandeha ho azy (pnatic);
4) Ny ampahany amin'ny milina fanapahana kitapo kaontenera CSJ-2200 dia misy sary boribory faribolana na faribolana voapaika;
5) Ny toeran'ny fiampitana dia misy ny fiarovana ny fiarovana ny makarakara;
6) Manana ny fiasan'ny fanapahana faribolana lehibe izy.
Xuzhou VYT Masinina sy Teknolojia Co., Ltd. dia mikendry ny hampivelatra sy hanamboatra milina rehetra mifandraika amin'ny FIBC, namboarina manokana sy namboarina ho an'ny fitaovana fanampiana FIBC fanampiny sy aoriana.
Nanamboatra milina amin'ny famokarana FIBC izahay nandritra ny taona maro, ny milina VYT dia manome serivisy ho an'ny mpanjifany, ho an'ny vahaolana ara-barotra tsara kokoa. Androany, mpanjifa maro any amin'ny firenena mihoatra ny 30 manerana ny tany no afa-po amin'ny kalitao sy ny fahamendrehan'ny vokatra sy serivisinay.
Mino izahay fa ho tsara kokoa sy ho tsara kokoa ny VYT, ny fangatahan'ny mpanjifa no motera tsy misy fiafaranay hanatsarana azy, ny fanohanan'ny mpanjifa sy ny fanamafisany azy no lasantsy hivoarantsika!
Manamboatra milina koa izahay araka ny fangatahan'ny mpanjifa, toy ny:
1.FIBC-1350 Masinina manapaka lamba lamba mandeha ho azy
2. Masinina fanapahana lamba automatique FIBC-2200
3. FIBC-6/8 Masinina fanetezana webbing mandeha ho azy
4. FIBC-PE tavoahangy famolavolana tavoahangy FIBC-PE
5. FK-NDJ-1 Masinina famolavolana endriny efajoro
6. Masinina famolavolana endrika boribory YK-NDJ-2
7. Masinina fanadiovana QJJ-A
8. Masinina fanapahana ultrasonic CSB-28K
Teo aloha: Jumbo Bag Belt webbing FIBC kitapo lehibe manapaka milina FIBC-6/8
Manaraka: Masinina fanamafisam-peo manapaka ny ultrasonia ampiasaina amin'ny Circular Loom
Jumbo Bag Fibc Bag Fanapahana hafanana feno ...